Funny – Shwemyanmar
FB ပေါ်မှာ ရည်းစားထားတဲ့အခါ ￼
FB ပေါ်မှာ ရည်းစားထားတဲ့အခါ ￼ FB ပေါ်မှာ ရည်းစားထားတဲ့အခါ ￼ “ကိုကို” “Video call” ပြောမယ်…￼ “ဟမ်” ဘာလဲ.. မပြောချင်ဘူးလား..￼ “အွန်.. ပြောမှာပေါ့” ဒုက္ခရောက်ပြီလေ… ကိုယ်က facebook မှာ B612 တို့ 360 တို့နဲ့ ရိုက်ပြီးတင်တာ… ခုရထားတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း facebook က ကောင်မလေး video call က မပြောဖူးဘူး.. သူခေါ်မယ်ပြောတိုင်း အီးပါနေတယ်.. မှောင်နေတယ်လို့ပဲ ညာနေတာ.. ခုတစ်ခါတော့ ညာလို့မရတော့ဘူး.. ခုနကလေးတင် B612 နဲ့ တစ်ပုံ ရိုက်ပေးပြီးပြီ… ဘာလုပ်ရမလဲ.. ဘာလုပ်ရမလဲ.. ဟိုက်! သိပြီ.. ￼ ” မေမေ” “ဟဲ့.. သား […]
Posted inFunnyLeaveaComment on FB ပေါ်မှာ ရည်းစားထားတဲ့အခါ ￼
လမ်းအလုပ်သမားတွေကို မဆိုင်ပဲသြဇာသွားပေးတဲ့ အမျိုးသမီး လက်သီးနဲ့အထိုးခံရ(ရုပ်သံ)
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ညပိုင်းအလုပ်ဆင်းနေတဲ့ လမ်းအလုပ်သမားတွေကို ဟိုလိုလုပ်ပါ၊ သည်လိုလုပ်ပါဆိုပြီး သူမနဲ့ မဆိုင်ဘဲ သွားပြီး သြဇာပေးခဲ့တဲ့အတွက် လမ်းအလုပ်သမားတစ်ဦးရဲ့ ထိုးကြိတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ ညပိုင်းလမ်းခင်းနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို အနှောက်အယှက်ပေးလိုတဲ့ သဘောနဲ့ ဝင်ရှုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို လမ်းအလုပ်သမားတစ်ဦးက ဖုန်းနဲ့ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း ရယူထားခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတော့ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဗွီဒီယိုရဲ့အစမှာ အမျိုးသမီးဟာ လမ်းကို အတာအဆီးလုပ်ရာမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ Barrier တွေကို ရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး၊ သူမရဲ့ ခြေထောက်တွေ ကတ္တရာခင်းစ လမ်းမပေါ်မှာ နစ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ သူမဟာ ခြေကားယားလက်ကားယားနဲ့ သူမကို ဒီလိုမလုပ်ဖို့ လာပြီးတာဆီးတဲ့ အမျိုးသားကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနောက် အဲဒီလူနောက်ကို ရန်လိုတဲ့သဘောနဲ့ အတင်းလိုက်သွားခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆုံးမှာ အဲဒီအလုပ်သမားရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်ကြောင့် […]
Posted inFunny, သတင်းLeaveaComment on လမ်းအလုပ်သမားတွေကို မဆိုင်ပဲသြဇာသွားပေးတဲ့ အမျိုးသမီး လက်သီးနဲ့အထိုးခံရ(ရုပ်သံ)
ဘေအကျိုးဆယ်ပါးက ဖြစ်ရာနေရာမှာ (၁) သွားရာနေရာမှာ ဖုန်းတာဝါတိုင်နှင့် နီးနေတက်ခြင်း (၂) ဆယ်လီဖြစ်ပြီထင်ရှားကျော်ကြားပြီး လူသိများခြင်း (၃) facebook ပေါ်တွင် ဝန်းရံသူ မိတ်ဆွေ ၊အဖော်အခြံအရံ များပြားခြင်း (၄) connection ပြတ်တောက်မူမရှိဘဲ လျှင်မြန်သွက်လက်စွာသုံးနိုင်ခြင်း ‌(၅) ဖုန်းဘေမရှိတဲ့ဘေးက အမြဲလွတ်ကင်းခြင်း (၆) facebookသုံးတိုင်း ချစ်သူ မိဘ တို့၏ဆဲဆိုခြင်းမှကင်းဝေးခြင်း (၇) ၃၆၀ camera b612စသည့် camera များသုံးစရာမလိုဘဲ နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းတွင်ပါဝင်သည့် beauty camera ဖြင့်ရိုက်ရသဖြင အဆင်းလှခြင်း (၈) အင်တာနက်သုံးတိုင်း ဖုန်းပု၍ လက်ပူခြင်းမှ ကင်းဝေးပြီးခန္ဓာ ကိုယ်ဟာအမြဲ အေးချမ်းနေခြင်း (၉) နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းများသူများထက်ဦးစွာ ပထမ ကိုင်ရခြင်း (၁၀) post များအား creditပေးစရာမလို ဘဲ […]
Posted inFunnyLeaveaComment on ဘေထည့်ပေးခြင်းအကျိုးဆယ်ပါး
တချိန်ယူမယ့်ဇနီးလောင်းသို့ ငါ့ထက် တော်သည်ဖြစ်စေ ငါ့ထက်ညံ့သည်ဖြစ်စေ ထိုအရာတွေကို မေ့လိုက်ပါ ငါက သွားမယ်ဆို နင့်က်ိုတိုင်ပင်မယ် နင်ကလုပ်စရာရှိမယ်ဆိုလည်း ငါ့အကုန်ပြောရမယ် နင်မပြောတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှ ငါမမေးဘူး ငါမပြောတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှလည်း နင်နားလည်ပေးဖို့လိုတယ် နင်မဖြေရှင်းနိူင်တော့တဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေဆို ငါ့ကိုပြောပါ ငါမဖြေရှင်းနိူင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေဆိုလည်း ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ပါ့မယ် ငါတို့အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်ကိုဆွဲပါ ဘယ်အရာမှ အစီအစဉ်မရှိပဲ စနစ်တကျ မအောင်မြင်နိူင်ဘူးဆိုတာ ယုံပေးပါ နင်ဗြူးတီးစလွန်းသွားသွား ကြိုက်တာတွေပဲဝယ်ဝယ် ငါဘယ်တော့မှဝင်မပြောဘူး ငါတို့ဝင်ငွေ ထွက်ငွေကိုလည်း နင်သိနေလောက်ပြီ ငါရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဇနီးလောင်းအပေါ် ငါယုံတယ် နင့်ကိုလည်း လိုတာထက် ပိုမချုပ်ချယ်ပါဘူး ငါ့ကိုလည်း တချို့ကိစ္စတွေနားလည်ပေးပါ နင်လည်း ငါ့ကနင့်ကို ပိုချစ်လာအောင် အမြဲကြိုးစားပါ ငါလည်း နင်’ငါ့ကို တနေ့ထက်တနေ့ပိုချစ်လာအောင် အမြဲကြိုးစားနေမှာပါ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေပါ စကားမရှုပ်ပါနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် စကားရှုပ်တာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် […]
Posted inFunnyLeaveaComment on တချိန်ယူမယ့်ဇနီးလောင်းသို့
ညတစ်ညဝင်ငွေကို အင်စတာဂရမ်ပေါ်မှာ ကြွားခဲ့တဲ့ အဖော်အချွတ် အကမယ်များ
ညတစ်ညဝင်ငွေကို အင်စတာဂရမ်ပေါ်မှာ ကြွားခဲ့တဲ့ အဖော်အချွတ် အကမယ်များ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ Pole dancer သို့မဟုတ် Stripper လို့ခေါ်တဲ့ အကမယ်လေးတွေရဲ့ ၀င်ငွေဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိ ဝင်ငွေရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မကြာသေးခင်က လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့လာတဲ ဓာတ်ပုံဗွီဒီယိုတွေမှာ အကမယ်လေးတွေဟာ ငွေပမာဏတောင်ပုံရာပုံကြားမှာ ၀င့်ကြွားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို လူတော်တော်များများက အံ့သြနေပါတယ်။ .. ဒီဓာတ်ပုံတွေထဲမှာပါတဲ့ ငွေတွေဟာ သူတို့ Pole dancer သို့မဟုတ် Stripper အဖြစ် တစ်ညတာလုပ်လို့ရတဲ့ ၀င်ငွေတွေဖြစ်ကြောင်းလည်း သူတို့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တော်တော်များများတော့ ဒီလောက်များပြားတဲ့ ငွေကို သူတို့မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပေမယ့်၊ နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကတော့ ဟုတ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုထားပါတယ်။ .. တစ်ချို့က ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ အပျော်သဘောနဲ့ ရိုက်ကူုးထားတာလို့ ထင်နေကြပါတယ်။ […]
Posted inFunnyLeaveaComment on ညတစ်ညဝင်ငွေကို အင်စတာဂရမ်ပေါ်မှာ ကြွားခဲ့တဲ့ အဖော်အချွတ် အကမယ်များ
” မသိဘူး.. ပေး” တနှစ်ကို ဝင်ငွေ ၄၈သိန်း ကျော်လို့ ရှိရင် ဝင်ငွေခွန် ဆောင်ရမယ်တဲ့ ။ ဆောင်တယ်လေ ။ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ပြီးတဲ့ ပိုက်ဆံထဲကမှ .. ထမင်းချက်စားတယ်ထား.. ဆန်ဖိုးမှာ အခွန်ပါတယ်.. ရေမှာအခွန်ပါတယ်… မီးဖိုသုံးတဲ့မီးမှာ အခွန်ပါတယ်.. အပြင်မှာသွားဝယ်စားတယ်ထား ဘာစားစား အခွန်ကပ်တယ် ပိုဆိုးတာ ဝန်ဆောင်ခ နဲ့ ခုံကြေး ပါ ဆိုင်ကို ထပ်ပေးရတယ်။ အဲ့တော့ငါတို့က ကိုယ့်စားပွဲကိုယ်ယူလာပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝင်ချက်စားရ မှာလား? အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ သမာအာဇီဝ ငွေဖြူနဲ့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားတာကို ကုန်သွယ်ခွန် ထပ်ပေးနေရတော့ လူကပေါက်ချင်လာပြီ။ မသိရင် ဆိုင်နဲ့ ဗိုက်နဲ့ကို ငါတို့က ကြားက အရှုံးခံပြီး ကုန်သွယ်နေတာ ကျနေတာပဲ.. မီတာခသွားပေးတယ်။ တယူနစ်ဘယ်လောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး ယူနစ်ဘယ်နှရာကို […]
Posted inFunnyLeaveaComment on မသိဘူး…​ပေး
ကိုယ့်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကို ကိုယ်ကအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ အထိပြောင်းလဲပါ
ကိုယ့်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကို ကိုယ်ကအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ အထိပြောင်းလဲပါ ကိုယ့်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကို ကိုယ်ကအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ အထိပြောင်းလဲပါ ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်နိုင်တဲ့သူတွေကို ကိုယ်က မေ့နိုင်လောက်တဲ့အထိပြောင်းလဲပါ ￼ ကိုယ်အတွက် အနာဂါတ်မရှိတဲ့သူတွေကို ကိုယ့်အနာဂါတ်မှာ သူမပါတော့တဲ့အထိပြောင်းလဲပါ ​ပေးဆပ်​ဖို့ပဲမကြိုးစားနဲ့ စွန့်​လွှတ်​ဖို့လည်းကြိုးစားအုံး ဒါမှ ကိုယ်​ဘဝထဲကို ​ပျော်​ရွှင်​စရာ​တွေ ဝင်​လာမှာပါ ဖမ်းဆုတ်​ထားလို့ နာကျင်​​နေပြီလား…. လွှတ်​ချဖို့ သင်​​မေ့​နေတယ်​ဆို သတိထားပါ… ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လိုက်ပါ ကိုယ်ပေးဆပ်ခဲ့တယ်မို့လား တနေ့ ကိုယ့်ကို သူတို့ ကောင်းကောင်းကြီးပြန်လွမ်းနေလိမ်မယ် လက်ချောင်းတစ်ချောင်းရဲတန်ဖိုး ဓားရှဖူးမှ သိလိမ့်မယ် လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုး မရှိမှ သိလိမ့်မယ် Credit to #mm — ￼feeling နာကျင်​​နေသူများသို့ ​ပေးစာ
Posted inFunnyLeaveaComment on ကိုယ့်ကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကို ကိုယ်ကအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ အထိပြောင်းလဲပါ
“ဆရာမ” “ဘာလဲ” “အရမ်းချစ်တယ် ဆရာမရယ်” “ဘာ ဘယ်လို” “ဆရာမရယ် ဖြေးဖြေးပြောပါ ချစ်လို့ချစ်တယ်ပြောတာကို” “တကယ်ချစ်တယ်ပေါ့” “ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲ ဆရာမရယ် ချစ်တာမှ ဆရာမရဲ့ဆံနွယ်လေးကအစ ဖိနပ်လေးကအဆုံး နောက်ပြီး” “ဒါဆို ကျွန်မကိုလက်ထပ်နိုင်လား” “ဟမ်” “ဘာ ဟမ်တာလား ကျွန်မမေးတာဖြေလေ” “ဟုတ်ဖူးလေ ဆရာမရဲ့ ကျွန်တော်ကချစ်တယ်လို့ပြောတာလေ။ ဆရာမက လက်ထပ်နိုင်လားဆိုတော့ ဟိုလေ အဆင့်များကျော်နေမလားလို့ပါ ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှ လက်ထပ်ဖို့အကြောင်းထပ်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်” “ဘာ ချစ်သူဘ၀နဲ့ နေချင်သေးတယ်ဟုတ်လား ဒီမှာ ရှင်နားလည်ထားရမှာက ကျောင်းဆရာမတွေရည်စားစကားအများဆုံးအပြောခံရတဲ့အရွယ်က ၂၅ နှစ်အထက်တွေရှင့်အဲ့အရွယ်က ရင့်ကျက်မှုတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ နန်းဆန်တဲ့အရွယ်ရှင့် ကလေးတွေလို ရည်းစား အပျော်တွဲရမယ့် အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူး ဒါကိုရှင်နားလည်ထားပါ” “ဗျာ ချစ်တော့ လည်းခွဲနေရမှာပေါ့” “နောက်တစ်ချက်” “ဟင် မပြီးသေးဘူးလား” “ရှင် ထမင်း ဟင်းချက်တတ်လား […]
Posted inFunnyLeaveaComment on ​ကျောင်းဆရာမကိုရည်းစားစကားပြောသောအခါ
အိပ်မက်မင်္ဂလာနှင့် စလေငခွေး . . . ဦးပေါ်ဦး ဟာသ
“ပေါ်ဦးရဲ့…အယူတော်မင်္ဂလာ တင်လျှောက်ချက်တွေ မှန်ကန်ပုံကဖြင့် များစွာ ချီးမွမ်း အံ့သြဖို့ ကောင်းပါကလား မောင်မင်း” ညီလာခံမှာ တင်စရာရှိတာတွေတင်၊ မင်းတရားကြီးကလည်း မေးစရာရှိတာမေး မိန့်စရာရှိတာ မိန့်ကြားတယ်။ အရေးကြီးတာတွေ အပြီးမှာ ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးအနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို သတိရဟန်နဲ့ ဖြတ်ပြီး မိန့်တော်မူလိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ်။…ကိုယ်တော်ရှင်မြတ် မြင်မက်တော်မူတဲ့ အိပ်မက်ကို နိမိတ်ကောက်ပြီး သမီးကညာ လေးယောက်ဆက်သပါလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ နိမိတ်ဖတ်ချက်အတိုင်း ဝေသာလီပြည်က သမီးကညာ လေးယောက်ပြည့်အောင် ဆက်သလာတယ်။ “ချီးမွမ်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပါဘုရား” “တစ်ခါ ဆင်ဖြူတော် နှစ်စီး ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်ဖတ်စကားလည်း မှန်တာပဲဟဲ့” “အံ့သြဖွယ် ကောင်းကြောင်းပါဘုရား” “နောက်ထပ်တစ်ဖန် နိမိတ်ဖတ်တာက ဓာတ်တော် မွေတော်များကို ပူဇော်ကိုးကွယ် ရလိမ့်မယ်တဲ့၊ ဟော…..တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သီဟိုဠ်ကျွန်းက သရီရဓာတ်တော်များ ကြွရောက်လာလို့ ပူဇော်ရတယ်ဟဲ့” “ဘုန်းတော်ကြောင့် […]
Posted inFunnyLeaveaComment on အိပ်မက်မင်္ဂလာနှင့် စလေငခွေး . . . ဦးပေါ်ဦး ဟာသ
“တကယ်​ချစ်​တဲ့ စုံတွဲတိုင်း လိုက်​နာရမည့်​ 🔟 ချက်​”
“တကယ်​ချစ်​တဲ့ စုံတွဲတိုင်း လိုက်​နာရမည့်​ 🔟 ချက်​” ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ (1⃣) ခဏခဏ မလိမ်ညာပါနဲ ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ လိမ်ညာတယ် ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေပဲ ကောင်းပါတယ် ခဏခဏ အလိမ်အညာခံလာရ ရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တဲ့ သူဖြစ်နေပါစေ တစ်နေ့ကျရင် ပေါက်ကွဲကာ လမ်းခွဲသွားနိုင်တတ်ပါတယ့် တကယ်လို ကိုယ်က အပြစ်ကျူးလွန်းထားတယ်ဆိုလည်း အမှန်တိုင်းဝန်ခံလိုက်ခြင်းက ရေ ရှည်မှာ ပိုပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးစိတ်ချမ်းသာရစေပါတယ့် (2⃣) မာန မထားပါနဲ့။ ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ မာန ဆိုတာ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ လုံးဝ မရှိသင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါ […]
Posted inFunnyLeaveaComment on “တကယ်​ချစ်​တဲ့ စုံတွဲတိုင်း လိုက်​နာရမည့်​ 🔟 ချက်​”